Medellín, Colombia: La Receta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Janoary 2018 17:38 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aogositra taona 2008 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Trohy Video MPEG4 (.mp4)
Trohy Video Flash (.flv)
Misorata anarana ao amin'ny Rising Voices Videos ao amin'ny iTunes
‘La Receta’ (“Ny Zavatra Ilaina”) – lahatsary novokarin'ireo mpandray anjara ao amin'ny tetikasa Rising Voices, HiperBarrio, any Medellín, Colombia. Raha hijery ny lahatsary amin'ny dikantsoratra amin'ny teny Anglisy, dia tsindrio ny zana-tsipìka eo amin'ny faran'ny havanana amin'ny horonan-tsary.
Tamin'ny fandraketam-peo farany mampahafantatra ny tetikasa HiperBarrio ao Medellín, Colombia, nanoritsoritra ny atrikasa nomeny ho an'ny tanora tao amin'ny faritry ny sarangan'ny mpiasa ao La Loma San Javier, izay tafiditra amin'ny Seminario de Comunicación Juvenil [ES] faha-16 any Medellín, na ny “Seminera momba ny Fifandraisan'ny Tanora” i Jorge Montoya [ES] Ny tanjon'ny seminera nandritra ny herinandro, araka ny voalazan'ny tranonkalany, dia ny “hanohy handinika ny fahasamihafana sy ny fisehony ho toy ny endrika fampidirana olona mandrafitra ny tanàna.” Jorge no nitarika ny atrikasa momba ny fampahalalam-baovao ary tamin'ny faran'ny herinandro, samy nanana ny bilaoginy manokana ny tanora tsirairay. Niara-niasa tao amin'ny vondrona bilaogy iray [ES] ihany koa izy ireo. Ary, ny tena mahatalanjona, dia namokatra horonan-tsary amin'ny endrika vaovao sy mahavariana momba ny traikefan'izy ireo tao amin'ny atrikasa ry zareo.
Mampiseho azy ireo manazava ny ‘zavatra ilaina’ amin'ny fomba hanatsarana ny fifandraisana manerana ny tanàna amin'ny fampiasana fitaovana fampandraisana anjara toy ny bilaogy ny horonan-tsarin'ireo tanora mpandray anjara – izay novokarina tamin'ny fampiasana Windows Movie Maker an'ny Microsoft. Amin'ny fiafaran'ny horonantsary, mahita pikantsary misy ny blaogin'ireo mpandray anjara isika (eo ankavanan'ny tranonkalan'ny atrikasa).
Nangataka tamin'i Jorge aho mba hamariparitra ny dingana nanaovana ny horonan-tsary.
Cuando estuvo planeado el asunto, ellos se dieron a la tarea de hacer una ambientación mínimamente de acuerdo con un programa de cocina, grabamos en cuestión de una hora y luego nos dimos a la tarea de editar entre todos con Movie maker, agregándole algunas de las fotos y cerrando con la invitación a que leyeran cada uno de los blogs nuevos.
Raha vantany vao voarafitra ny zava-drehetra, dia nanao ny asany tahaka ny manao fandaharana momba ny nahandro amin'ny fahitalavitra izy ireo. Nandrakitra izany tao anatin'ny adiny iray izahay ary vetivety dia nanomboka nikirakira izany tamin'ny Movie Maker, nanampy sary sasantsasany, ary namintina ny horonantsary tamin'ny fanasana hamaky ny bilaogy vaovaon'ireo mpandray anjara tsirairay.
Nankafy ny traikefa izahay rehetra. Nihomehy be izahay ary mino aho fa ny zavatra fototra dia ny fandinihana ny maha-zava-dehibe ny mampahalala sy nampahafantarina, izay tanjonay voalohany alohan'ny hanandramana hampianatra ny antsipiriany ara-teknika momba ny fomba hanokafana bilaogy. Efa feno vaovao momba ny fomba fanaovana izany ao. Tianay ny manao zava-baovao, amin'ny teny izay mora azon'ny olon-drehetra, miaraka amin'ny fahatsapana fampandrosoana hiditra, ary hiteraka fahalianana.
Na dia nosoratana tamin'ny teny Espaniôla aza ny lahatsoratra rehetra, dia maro tamin'ireo mpandray anjara HiperBarrio no nampiditra ny sarin'ny tanànan'izy ireo. Ohatra amin'izany ireto:
De lo urbano a lo Rural, avy amin'i Tifany Henao
Historias de Caminantes, avy amin'i Catalina Restrepo
La Loma ¿rural o urbano?, avy amin'i Mitchel Restrepo
Seminario de Comunicación: Las mejores fotos, avy amin'i Johana Camargo
En el cielo de Medellín, avy amin'i Marcela Arias
Bitácora personal de viaje, avy amin'i Alexander
Tahaka antsika rehetra, azoko antoka fa ireo bilaogera vaovao ireo dia hankasitraka fanehoan-kevitra sy fandrisihana ary na dia fiarahabana tsotra fotsiny avy amin'izao tontolo izao aza.
Amin'ny fampiasana dotSUB, afaka manampy amin'ny fametrahana ny horonantsarin'izy ireo amin'ny fiteny maro hafa koa ianao amin'ny alalan'ny fandikana ny rakitsoratra fohy. Misorata anarana hahazoana kaonty ary misafidy fiteny tianao handikana ny horonantsary eo amin'ny zoro farany havanana amin'ny pejin-dahatsary. Nanao horonantsary fohy mamaritra ny fomba fandikana sy fametrahana dikantsoratra an-dahatsary amin'ny dotSUB aho.